Maitiro Ekumhanyisa Email Campaign neGmail | Martech Zone
Dzimwe nguva haudi email izere mupi webasa (ESP) nemabhero ese uye muridzo werondedzero manejimendi, vavaki veemail, kuburitsa, uye zvimwe zvishandiso zvakaomarara. Iwe unongoda kutora rondedzero uye kutumira kwariri. Uye, hongu, kana iri yekushambadzira meseji - ipa kugona kune vanhu kuti vasarudze kubva mune ramangwana mameseji. Ndipo panogona kuve YAMM mhinduro kwayo.
Asizve Imwe Tsamba Dzakabatanidzwa (YAMM)
YAMM ndeye Chrome-inogoneswa email kusanganisa chirongwa chinogonesa vashandisi kuvaka runyorwa (kuburikidza nekungenisa kana Google Fomu), dhizaina email nekuita, kuitumira kune iyo rondedzero, kuyera mhinduro, uye manejimendi kuzvinyora zvese mune yakapusa mhinduro.
YAMM: Nyore Sarudza-Kubuda Email Sanganisa neGoogle Mail & Spreadsheets
Isa shamwari dzako muGoogle Sheet - Isa kero dzeemail dzevanhu vaunoda kutumira email muGoogle Sheet. Unogona kuvatora kubva kuGoogle Contacts kana kuendesa kunze kubva kuCRMs seSalesforce, HubSpot, uye Copper.
Gadzira yako meseji muGmail - Sarudza template kubva pane yedu template gallery, nyora yako email zvemukati muGmail, wedzera imwe yekuita, uye chengeta seyakanyora.
Tumira mushandirapamwe wako neYAMM - Dzokera kuGoogle Sheets kuti utumire uye uteedzere mushandirapamwe wako weemail neRimwezve Rakaunganidzwa Tsamba. Iwe unozogona kuona kuti ndiani abhucha, asina kuzvinyoresa, akavhurwa, ndokudzvanya, uye ndokupindura kune ako mameseji kuti iwe ugone kuziva chekutumira iwo anotevera.
Kuti utange, ingoisa YAMM muGoogle Chrome. YAMM ine huru mapepa naizvo.
Isa YAMM pane Chrome
Tags: clickse mishandirapamweGmailgmail yekuteveragoogle mafomugoogle g suitesei kutiyam